Raozy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fisarahana ny raozy ho an'ny kilasy sy vondrona
Iray amin'ireo zavamaniry malaza indrindra amin'ny tontolo maoderina ny "mpanjakavavin'ny voninkazo" - ny rose. Ny hita avy amin'ny arkeolojia dia manondro fa na tamin'ny taonjato V tany avaratry ny BC aza. e. Nanomboka nitovy ny sariny tao an-tokantrano, ny zavakanto. Nandritra ny taonjato maro nifandimby, ny fifangaroan-tsolika, ny fifindrana sy ny fikajiana voajanahary, dia misy vondrona maro sy karazana raozina, izay mifangaro araka ny toetra mampiavaka azy.
Fanosotra ravin-dite mihosotra: homemade recipe
Tsy hahagaga anao ny olona amin'ny fehezam-boninkazo mavokely na ny voninkazo, fa ny raozy misy rambony na toeram-pamokarana divay dia zavatra vaovao! Ahitana vokatra roa avy amin'ny rose petals: divay sy menaka. Tena zava-tsarobidy tokoa ny vokatra azo avy amin'ny sakafo, manan-karena amin'ny vitaminina sy asidra matavy, ary ny vokatra avy amin'ny raozy dia manana fiantraikany amin'ny fifehezana ary mamporisika ny fanasitranana ny taovam-pandrenesan'ny taova.
Rose "Westerland": famaritana ny endriky ny fikarakarana, famokarana
Rose "Westerland" (Westerland) - iray amin'ireo karazana tsara indrindra eo amin'ny ravina vita amin'ny spray sy semi-variegated. Ary tsy zava-poana izany, satria ankoatra ny endrika miavaka, ity zavamaniry ity koa dia manana fanoherana tsara amin'ny aretina sy ny hafanana. Tsy voninkazo, fa fahagagana ho an'ny mpamboly iray! Noho izany, raha manapa-kevitra ny hamboly azy ianao amin'ny sainao dia tsy diso ianao amin'ny safidy.
Rose "Augustus Louise" (Augusta Luise): famaritana varia sy fitsipika momba ny fambolena
Rose "Augusta Louise" dia heverina ho iray amin'ireo karazana tsara tarehy sy malaza indrindra izay efa hita ety anaty saha sy zaridaina. Fitiavana, azony ny voninkazo marevaka mavokely mavokely sy ny felany. Io voninkazo tsara tarehy sy tsara tarehy io ankehitriny dia ampiasaina amin'ny famolavolana sy famokarana fety, ary fanomezana.
Anglisy rose "Pilgrim": mitombo sy mikarakara
Ny raozy rehetra dia voninkazo mpanjaka, ankafizin'ny firaisana ara-drariny. Saingy ny fijerin'ny valan-javaboary dia miavaka: ny lohahevitr'ireo raozy any amin'ny toeram-pambolena anglikanina dia ny fofon'izy ireo tsy manam-paharoa sy ny voninkazo mahaliana mahavariana. Inona avy ireo singa hafa amin'ireo voninkazo ireo, ny fomba fijerin'izy ireo sy ny fomba hikarakarana ireo zaridaina maimaim-poana, vakiana ao amin'ny lahatsoratra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Raozy